I-Semalt Expert: I-CloudFlare Botnet
Kukho inkonzo entsha yebhotnet ehlasela amaninzi amaseva. I-botnet entsha ayinalo igama kodwa ibangela ukuhlaselwa kweDDoS ezininzi. I-Botnets zivela kwiingcali ze-IT ezenza ukuxhaphaza, i-malware kunye neentsholongwane ukwenza imisebenzi enobungozi. Uhlaselo olutsha lwe-botnet luziphatha njengama-botnets afanayo, umzekelo njengebhokisi le-Mirai. Le nethwekhi yebhobho inekhono lokuzisa amanethiwekhi amaninzi ekuhambeni - was ist ein guter dienstleister umzug. Oku kuxhaphaza ngenye yezinto ezinzima kakhulu zokuhlaselwa kweenkonzo. Kukho imiba ephumayo malunga nokukhuseleka kwezixhobo ze-IoT kule hlaselo. Ezi zixhobo ziza kuba nokuthengisa ezininzi ngexesha leKrismesi. U-Nik Chaykovskiy, u-8 (Semalt uMphathi oyiNtloko umPhumelelo weMathengi, uchaza ukuba ngeli xesha, abahlaseli banokuba nethuba lokuhambisa ukuhlaselwa kwamatnet amaninzi kumaseva ahlukeneyo.
NgoNovemba wama-23, i-CloudFlare yabona ukuhlaselwa kwebhoknethi efana ne-400Gbps kunye nomda omncinci we-172Gbps. Kuthatha i-CloudFlare iingcali malunga ne-8.5 iiyure ukuphendula le DDoS ukuhlaselwa. Ukuhlaselwa kwe-botnet kuthatha iintsuku ezilishumi ukukhanyela inkonzo yeeseva ezithile. Ukuhlaselwa kwe-botnet kwakusebenzisa ukubethelwa kwezinto ezintle ezahlukahlukeneyo ezivela kwi-botnet ye-Mirai. Ngokomzekelo, kwakukho izikhukhula eziphezulu zeTraer 3 kunye ne-Layer 4 ezihlasela i-protocol efanayo ye-TCP. Kukho ukuhlaselwa eJamani okwakubangelwa ukulahlwa kweNkonzo kwiiklayenti zikaDeutsche Telekom.
I-Botnets inokuchaphazela umhlaba wezemidlalo
Le Krismesi, abadlali be-gamers bangase bafumane ukuhlaselwa kweehack kwezinye zeenethiwekhi zabo. Ezinye zeMicrosoft Xbox ziduduze zijongene nokuhlaselwa okunjalo. Nangona amanethiwekhi e-PlayStation akwa-Sony aye ahlaselwa ngamashishini e-botnet. Amashishini amaninzi aphumelele ahlaselwa kakhulu ngexesha lonyaka.
Amashishini ashishino kunye ne-e-commerce website angakwazi ukuhlaselwa yi-botnet. Ukuba isayithi ihla, kunokukhokelela ukuqhubela phambili okungalunganga kwi imizamo yokuthengisa yedijithali. Ngokomzekelo, ukufakwa kwewebhusayithi yakho kungena phantsi kwe-SERP. Kwezinye iimeko, abathengi banokulahlekelwa ukuthembela kwiwebhusayithi yakho, kwaye ekugqibeleni babe ngabaxumi bakho kukhuphiswano. Ezinye zeendlela ze-SEO zamacandelo zisebenzisa uhlaselo lwe-botnet kwisayithi lakho kukhuphiswano. Ezi zixhobo zentambo ebomnyama zinceda uhlaselo olunobungozi lungene kwiinkqubo ezichaphazelekayo.
Zonke iinkcukacha zezoshishino ze-e-commerce kufuneka ziqaphele ukuhlaselwa kwe-cyber ezingasongela kubasebenzisi bazo. Kukho imfuneko enkulu yabasebenzisi ukuba bafumane iindlela ezifanelekileyo zokukhusela amanethiwekhi abo kwi-botnet traffic. Kwiminyaka edlulileyo, amaninzi amaninzi okulahlwa kweenkonzo ajongene namaseva aphumelelayo. Amashishini afumana ilahleko ezinkulu ezi zihlaselo. Kukho amanethiwekhi amaninzi eikhompyutha ze-Zombie ezihlasela amanethiwekhi eikhomputha. I-CloudFlare yafumana ukuhlaselwa okwenza umsebenzi upheleleke kwinkampani yabo. Uninzi lwama shishini luxhomekeke kwezi zihlaselo. Unokufumana iindlela ezintsha zokujongana nale hlobo lokuhlaselwa kwesi sikhokelo. Kwakhona kubalulekile ukucoca i-botnet traffic kwiseva yakho.